Black Magic: Myanmar News Channel v1.0 For Android [466 KB]
Myanmar News Channel v1.0 For Android [466 KB]
Posted by Black Magic | Posted in Android Applications | Posted on 11:42 AM
Android ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာ့သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုနိုင်မယ့် Myanmar News Channel လို့ခေါ်တဲ့application လေးတစ်ခုရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ Application လေးမှာပါဝင်တဲ့
-ရွှေဈေး ၊ ငွေဈေး
- Myanmar Model Photo
Web အခြေခံတဲ့ Application လေးဖြစ်တာကြောင့် အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မကောင်းရင်တောင် ဒီ App လေးကိုအဆင်ပြေပြေသုံးစွဲနိုင်မှာပါ။ Myanmar News Channel for Android ကို Google Play မှာဝင်ရောက်download ရယူနိုင်ပါပြီ။
Google Play ဝင်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကတော့ အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်...၊
☂Zippyshare☂ ♪ ☂Miloshare☂ ♪ ☂Mirrorcreator☂
The best app for Myanmar News Reader. This app can use to read Myanmar & Foreign update news.
This application include six news categories:
-Gold & Currency Exchange News
-Myanmar Model News
Developer- Thet Naing Soe
Official Website- www.myanmarmobileapp.com
[Credit]သက်နိုင်စိုး (Myanmar Mobile App Store)